Archives des Faits-Divers - Page 1352 sur 1356
Betroka : Mpanakan-dàlana voatifitra
Redaction Midi Madagasikara 22 novembre 2013 Betroka, Mpanakan-dàlana, voatifitra
Roa lahy no indray maty tsy tsa-drano rehefa notifirin’ny mpamily taxi-brousse tany akaikin’ny tanànan’i Betroka. Nivadika tanteraka araka izany ny rasa, satria ireo jiolahy indray no rifatra nitsoaka nanoloana ny zava-nitranga. Tao Ankarandoha, alohan’ny hidirana ao Betroka, no nisian’izany. Tsy nampoizin’ireo olon-dratsy mihitsy ny nanjo azy ireo. Ny loharanom-baovao no nahalalana fa vao lavitra dia…
Omaly maraina no notokanana ny « Poste de Police de Proximité » eny amin’ny fokontany Ankadifotsy-Antanifotsy, ao anatin’ny Boriborintany fahatelo eto Antananarivo Renivohitra, izay eo ambany fiahian’ny « Commissariat de Police » ao Antaninandro. Tonga nitokana izany tamin’ny fomba ofisialy ny minisitry ny Filaminana Anatiny, ny Contrôleur Général de Police Rakotondrazaka Arsène, notronin’ireo mpiara-miasa aminy akaiky. Vonona ny polisim-pirenena,…
Andohoranofotsy : Efadahy mpanao fanafihana voasambotra niaraka tamin’ny basy
Redaction Midi Madagasikara 21 novembre 2013 Andohoranofotsy, basy, Fanafihana
Nahitana vokany ny hetsika nataon’ny mpitandro filaminana avy ao Andohoranofotsy. Voasambotr’izy ireo ny jiolahy efatra fantatra fa mpanao fanafihana amin’ny faritra maro. Tamin’ny fotoana nisamborana azy ireo dia voalazan’ny vaovao fa vao avy nanafika tany Faratsiho izy ireo. Sendra ny tsy nampoiziny anefa ka izao tra-tehaka izao izy ireo. Ny loharanom-baovao hatrany no nahalalana fa…
Toliara : Vehivavy 53 taona niteraka kambana
Tranga hafakely tsy dia fahita na fandre matetika no niseho tao Toliara tamin’ity herinandro ity. Ramatoa efa mananika nyfaha-53 taonany nitondra vohoka no niteraka kambana soa aman-tsara tsy nisy olana ny 11 novambra lasa teo. Mpamboly monina any amin’ny distrikan’i Toliara II ity ramatoa ity ary zanany fahenina ireto naterany farany ireto. Amin’ny maha tambanivohitra…
← Précédente 1 … 1 351 1 352 1 353 … 1 356 Prochain &arr;